Ingabe uNkulunkulu ubangela ukuhlupheka? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Ingabe uNkulunkulu ubangela ukuhlupheka?
Cha. Abantu bakhetha ukuzibeka ngokwabo isifundo-izilingo ezenzelwe ukuvivinya ukholo lwabo. Lokhu kungabonakala njengokuhlupheka.
Kubalulekile ukwazi ukuthi uNkulunkulu unokholo olungapheli emandleni akho okunqoba lezi zivivinyo kubandakanya ukubhekana nokugula, ubumpofu, njll.… Izilingo zivunyelwe ngoba unenkululeko yokuzikhethela. Ngokwengeziwe, zibonwa njengezifundo eziwusizo ezingakusiza esikhathini sonke sempilo.
Amandla okholo ayindophi engapheli phakathi kokholo lwakho kuNkulunkulu nokholo lukaNkulunkulu kuwe.
Lapho ngicabanga emuva ezikhathini ezinzima empilweni yami, ngikhumbula ngokungacacile izingqinamba engabhekana nazo. Ngomzamo wokuyeka imijikelezo engemihle engadingeki, ngazinika ukuzivocavoca umzimba okwesikhashana lapho ngikhungathekile. Ngizama ukucabanga ukuthi yiziphi izinkinga engihlangabezane nazo eminyakeni eyishumi eyedlule, ngithinta indlela engangizizwa ngingenathemba ngayo. Ngibe sengikhumbula ukuthi inkinga yami isixazululiwe futhi namashwa ami esikhathi esizayo nawo azobakhona. Ukuthi zilungiswe kanjani akubalulekile. Okubalulekile ukuthi azisekho.
Amathegiukuqonda uNkulunkulu izifundo ukukhula komuntu siqu ingokomoya ukuhlupheka